HS:-Inta aanan u guda gelin warar xaqiiqda u dhaw oo naga soo gaaraya shir gaar ah oo ay magaalada washington ku yeesheen madaxda bariga africa oo aysan ku jirin Soomaaliya siiba wadamada deriska la ah Soomaaliya iyo madaxweynaha Uganda lana yeesheen xoghayaha arimaha dibada Mr J Kerry.
Hadii aan Soomaali badan u soo koobno siyaasada madaxweynaha Soomaaliya isaga iyo xisbigiisa waa uga dhamaatay waxii ka danbeeya 2016-ka. hada kama hordhaceyno qodobada keenay arintaas laakinse waxaa jira qorshe uu hormuud ka yahay madaxweynaha dalka jabouti kaasi oo ah sidii hogaanka dalka Soomaaliya isbedel loogu sameyn lahaa shaqsi si loo helo isbedel dhab ah oo uu amaanka dalka ugu horeeyo.
Wararka qaarkood ayaa sheegaya tan iyo waxii ka danbeeyey soo gelitaankii ciidamada jabouti ee Soomaaliya in uu madaxweynaha dalka Jabouti si wanaagsan u bartay Soomaalida kuwooda fowdo ku nool ah iyo kuwa doonaya iney horey u socdaan.
Ololaha socda waa sidii ay dalka Soomaaliya uga dhici laheyd doorasho 2016-ka walow shaki xoogan laga muujinayo in ay arintaas lugooyaan madaxweynaha Soomaaliy aiyo xisbiga lagu xanto ee Dam-jadiid oo hada waxii ka danbeeya lag ailaalin doono in ay gacantooda ku dhacdo dhaqaalaha dalka Soomaaliya loogu deeqo kaliyana ay maamuli doonaan wax aan ka badneyd mushaarka shaqaalaha dowlada.
Hadaba hadaan wax yar o soo koobno ujeedada ka danbeysa ee ay dowlada mareykanka ugu yeertay hogaamiyaasha Africa ma ahan jaceyl loo qabo qaarada Africa ee waxaa dalka MAreykanka ku soo baxay awood muuqata iyo culeys siyaasadeed ka soo wajahay wadamada Ruushka, Chinaha, Brazil, Suoth Aftica iya Indiya.
wadamadan ayaa dhawaan sameystay uru loogu magac daray BRICS ururkaan waxaa wadankasta laga so qaatay xarafka ugu horeeya ee wadankiisa.
Tusaale B waxey ka dhigan tahay Brazil .R waxey ka dhigan tahay Russia. I waxey ka dhigan tahay India. C waxey ka dhigan tahay China ugu danbeyna S waxey ka dhigan tahay South Africa.
ururka Brics waxaa hada lagu wadaa in lagu soo daro Japan oo ay wadamadan kala dhaxeeyaan ganacsi fiican doonayan si uu u ilaashado ganacsigiisa inuu qanciyo kuna biiro. dowladahan ayaa isku geeyey dhaqaalo bilaaw ah oo lagu qiyaasay 50 Billion iyo 100 Billion loogu talo galay Insurance oo kale oo lagu ilaalinayo dhaqdhaqaaqa 50 Million.
lacagtaas waxaa looga kaaftoomayaa dhaqaalahii deynta ahaa ee ay IMF iyo World Bank aduunka ku maamulayeen waxeyna doonayan iney fursad siiyaan wadamada soo korayo ee hada uu ku dhacay dib u dhaca laakinse qeyraadka dhax ceegaago ayna la hareen siyaasadaha reer galbeedka.
Sida muuqato dagaalka dhaqaalaha ee ku soo wajahan Mareykan iyo culeysyo siyaasadeed oo kale oo ay ugu weyn tahay qalalaasaha bariga dhexe ee uu ku taageero hal dowlad oo kaliya ayaa waxey aduunyadii hada gashay dagaal qaboow oo u dhaxeeya Ruushka iyo mareykanka waxaan ala kaka jidanayaa dowladaha saboolka ah ee badankood ka jira qaarada Africa.
Daraasaad dhab ah ayaa lagu ogaaday 5 years kedib in ay dhaqaalah aaduunka la wareegayaan Shiinahaha Ruushka oo hada ay shacabkoodu heystaan hogaamiye aad u karti badan waxey siyaasadiisu la jaanqaaday dalka Chinaha.dowladaha aduunka ee si wanaagsan u yaqaana dhaqanada foosha xun iyo siyaasadaha qariban ee reer galbeedka ayaa hada ku so badanaya aduunyada waxaana dhici karta in ay fursad nabadeed helaan wadamo badan oo ay Soomaaliya ku jirto maadaama dhibaatada iyo mushkiladah aaduunka ka jiro ay hooyo iyo aabo u yahiin reer Galbeedka loolanka hada muuqdo waxey dani ugu jirtaa wadamada saboolka ah ee Soomaaliya ookale ah laakinse ay dhulkiisa ka buuxaan qeyraadka.
waxaa kale oo taasi ka sii daran oo keenay inuu so odeg dego walwalka mareykanka ee wadamadan la baxay ururka Brics wadankasta waxaa u qorsheysan inuu keeno dhawr wadan oo qaaradiisa ah waxaana arinatas ka mirodhaliyey dalka Brazil oo iskau 90% soo xero geliyey qaarada koofurta America dowladaha ku yaal oo iskugu jira wax maraykan neceb iyo kuwo doonaya dhaqaalo siyaasada mareykanka looga soo furfuro.
wadamada kalena waa la mid oo South Africa waxey badanaa hormood u tahay siyaasadaha dhawr dowladood oo African ah Ruushkana waaba kan dowladaha yurubta galbeed ku mashuuliyey arinta Ukrane oo meel ay dhaqaaqan ma jirot siweyn ayuu u bahdilay waxuuna dowladaha hada kul amidoobay ururkaan tusiyey reer galbeedka ay ka cabsadaan waxa ay yahiin.
Hadaan soo koobno siyaasada dalka Soomaaliya 2016-ka waxaa dalkaas hogaamin doona aqoonyahan ka soo jeeda Hiiraan waxaana doorashada iskugu so hari doono dhaw qofood oo reer Hiiraan ah oo uu midkasta ay soo sharaxdeen ururo Soomaali ah laakinse ugu danbeyn shaqsi reer Hiiraan ah ayaa ku soo baxaya doorashadaas waxeyna arintaan si weyn banaanka u imaaneysaa bisha dec ee sanadkaan 2014-ka.
Mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliya iyo kooxda la sheego inuu ka tirsan yahay walow uu horey u sheegay inuusan koox gaar ah ka tirsaneyn hadane marka la eego awooda siyaasadeed ee wasiirka cadaalada Farax cabdulqaadir aduunyada walwal ayye ka muujiyeen Dam-jadiid kooxda la baxday.
waa macquul iney la jaanqaadaan siyaasadaha cusub madaxweynaha iyo kooxdiisa oo ay soo sharaxdaan shaqsi reer Hiiraan ah amaba beesha loo badinayo iney doorashada soo socoto ugu fursad wanaagsan tahay sida lag aso oxigtay hogaamiyaal badan oo ka mid ah qaarada Africa uuna kaalinta 1aad kaka jiro madaxweynaha dalka jabouti H.E. Wiil Hoog Cumar Gelle.
Waxaa kale oo iyaduna meesh aka baxday 22 sano kedib doonitaankii Soomaaliland ee ahaa ictiraaf waxeyn aku socdaan State ka mid ah maamulada Soomaaliweyn waxaadne ka garan kartaa heshiisyada shirkadaha shidaalka ee mustaqbalka Soomaaliya ka soo saaray ashidaal lagu qiyaasay 110 Billion Fuusto oo shidaal ah oo ku aasan dhulka Soomaaliya hoostiisa bad iyo beri.
Isku soo duuboo waxey siyaasada Soomaaliya maalinba meel soo joogtay waxey hada dib ugu laabatay gobolka Hiiraan oo ay ka soo askuntay hadii aad tahay aqoonyahan reer Hiiraan ah amaba aad bulshada dhexdeeda ku leetahay sumcad oo aad ka gadmi karto Soomaaliweyn fursadaha ay aduunyada had aka hadleyso waa reer Hiiraan oo dalkaan lagu tijaabiyo.
La soco warbixin dhameystiran dhawaan.
· admin on August 07 2014 23:34:24 · 0 Comments · 1417 Reads ·
14,637,961 unique visits